Shiinaha XYS Free Sunta Mashiinka Mashiinka Mashiinka (Heerka) soo saarayaasha iyo alaableyda | Xieyanshi
XYS Booqday Furimaha Dagaalka Mashiinka Qalalan ee Bilaashka ah (Heerka)
Nidaamku wuxuu ku shaqeyn karaa dabacsanaan goobta shaqada. Nidaamka qalabka oo dhan wuxuu udub dhexaad u yahay nadiifiyaha wasakhda boodhka-kaas oo korsada sumcadda caanka ah ee caanka ah ee reer Yurub. Qalabka waxaad ku ridi kartaa nadiifiyaha, sida warqadda ciida, sanderska iyo waxyaabo kale.
Waxaa lagu qalabeyn karaa labadaba shiidi koronto ku shaqeeya iyo dekedo wax shiida oo hawadu ku shaqeyso, sanders kala duwan oo hawada / korontada ku shaqeeya.
Alaabtayadu waxay ka faa'iideysaneysaa adeegsiga soo saare boodh xirfad leh si loo nadiifiyo, taas oo ka dhigi karta dusha sare ee jilicsan iyo birghter. Tusaale ahaan, marka soo saaraha boodhka uu shaqeeyo, gaariga wuxuu ku jiraa jawi nadiif ah oo nabdoon. Waxay hagaajin kartaa jirka gaariga oo jilicsan, kaas oo nadiifin kara oo buufin kara rinjiga gaariga dhaawacmay isla markaana ka dhigaya jirka dhaawacmay sida siman ee cusub.
1.Qiyaas ahaan, naqshad xirfadeed, dhaqdhaqaaq siman inta lagu jiro hawlgalka, aad ugu habboon in la isticmaalo
Mashiinka faaruqinta ah ee la soo dhoofiyo, mid xasiloon oo waara oo otomaatig ah 3.control unit, xaalada shaqada waxaa lagu soo bandhigi karaa shaashadda, wax qabadkuna waa xasilloon yahay.
4.Waxay ku habboon tahay boodhka Class L
5.Awoodda soo saarida qaldan iyo wasakhda wasakhda boodhka
Marble Terrazo Wet Grinder Grinder Stone Fixing Gloss Polishing Grinding Mobile Mashiinka Mashiinka, balaca 500mm, waa cabirka ugu yar ee ka mid ah taxanaha qaab dhismeedka marsada.
Nidaamku wuxuu u oggol yahay laba shaqaale inay isla mar wada shaqeeyaan.
Badanaa waxaa loo isticmaalaa aqoon isweydaarsiga birta iyo rinjiga ka saarista rinjiga, baalka hore ee baalka wax shiida.
Hore: Waraaqaha Kabaha ee Warqadda Nalalka ee Nadiifsan oo Qalalan
Xiga: Rinjiyeynta La tuuro Koobka Qoriga
XYS Booqday Furimaha Dagaalka Qalalan ee Bilaashka ah (Dhaqaale)